YINTONI I-SOLID-STATE DRIVE (SSD)? INKCAZO YE-SSD - ITHAMBILE
Ngelixa uthenga ilaptop entsha, usenokuba ubonile abantu bexoxa malunga nokuba isixhobo esine-HDD sibhetele okanye sine-SSD. Yintoni iHDD apha? Sonke siyazi malunga nediski yediski. Isixhobo sokugcina esetyenziswa ngokubanzi kwii-PC, iilaptops. Igcina inkqubo yokusebenza kunye nezinye iinkqubo zesicelo. I-SSD okanye i-Solid-State drive yindlela entsha entsha kwiDisk drive yeDisk. Ingene kwimarike kutsha nje endaweni yedrive drive, nesona sixhobo siphambili sokugcina ubunzima iminyaka eliqela.
Nangona umsebenzi wabo ufana nalowo wehard drive, azakhiwanga njengee-HDD okanye ukusebenza njengazo. Umahluko wenza ii-SSD zahluke kwaye unike isixhobo izibonelelo ezithile kwidiski enzima. Masiyazi ngakumbi ngeeSolid-State Drives, uyilo lwazo, ukusebenza kwazo, nokunye okuninzi.
facebook messenger akafumani mifanekiso
Zisebenza njani iiSolid State Drives?
Kutheni i-SSD isetyenziswa?
Ngaba ii-SSD zinokusetyenziselwa zonke ii-PC?
Siyazi ukuba inkumbulo inokuba ziindidi ezimbini - eguqukayo kunye engagungqiyo . I-SSD sisixhobo sokugcina esingazinzanga. Oku kuthetha ukuba idatha egcinwe kwi-SSD ihlala nasemva kokumiswa kombane. Ngenxa yoyilo lwabo (zenziwe nge-flash controller kunye ne-NAND memory memory chips), ii-solid-state drives zikwabizwa ngokuba zii-flash drive okanye iidiski ezomeleleyo.
Iidiski zediski enzima bezisetyenziswa ikakhulu njengezixhobo zokugcina iminyaka emininzi. Abantu basasebenza kwizixhobo ezinediski enzima. Ke, yintoni eyatyhala abantu ukuba baphande ngesixhobo esinye sokugcina ngobuninzi? Ziye zabakho njani ii-SSD? Masithathe umbono omncinci kwimbali ukuze siyazi inkuthazo ebangelwa zii-SSD.
Kwiminyaka ye-1950s, bekukho itekhnoloji ye-2 esetyenziswayo ngokufana nendlela esebenza ngayo ii-SSD, ezizezi, imemori engundoqo yemagnethi kunye nekhadi lokufunda kuphela lekhadi. Nangona kunjalo, kungekudala ziye zaphela ekulibalekeni ngenxa yokufumaneka kweeyunithi zokugcina igubu ezingabizi kakhulu.
Iinkampani ezinje nge-IBM zisebenzise ii-SSD kwii-supercomputer zazo zokuqala. Nangona kunjalo, ii-SSD zazingasetyenziswa rhoqo kuba zazibiza. Emva kwexesha, ngoo-1970s, isixhobo esasibizwa ngokuba siMbane esinoMbane Igumbi yenziwe ziiGeneral Instruments. Nale, ayizange ihlale ixesha elide. Ngenxa yemicimbi yokuqina, esi sixhobo naso asifumananga kuthandwa.
Ngo-1978, i-SSD yokuqala yayisetyenziswa kwiinkampani zeoyile ukufumana idatha yenyikima. Kwi-1979, inkampani i-StorageTek iphuhlise i-RAM ye-RAM yokuqala.
i-RAM Ii-SSD ezisekwe ixesha elide bezisetyenziswa ixesha elide. Nangona bekhawuleza, batya izixhobo ezininzi ze-CPU kwaye babebiza kakhulu. Kwasekuqaleni kuka-1995, ii-SSD ezisekwe kwiflash zaphuhliswa. Ukusukela ekungenisweni kwe-SSD esekwe kwiflash, usetyenziso oluthile lweshishini olufuna okhethekileyo I-MTBF (ixesha elichazayo phakathi kokusilela) rate, ii-HDD zithathelwe indawo zii-SSD. Ukuqhuba kukarhulumente oqinileyo kuyakwazi ukumelana nokothuka okukhulu, ukungcangcazela, utshintsho lobushushu. Ngaloo ndlela banokuxhasa ngokufanelekileyo Amaxabiso eMTBF.
Ii-SSDs zakhiwe ngokudibanisa ndawonye ii-memory chips kwi-grid. Iichips zenziwe nge-silicon. Inani leetshipsi kwisitaki litshintshiwe ukufezekisa uxinizelelo ezahlukeneyo. Emva koko, baxhotyiswa ngesantya sokudada emasangweni ukuze babambe imali. Ke ngoko, idatha egciniweyo igcinwa kwii-SSDs naxa zikhutshiwe kumthombo wamandla.
Nayiphi na i-SSD inokuba neyenye yeefayile ze- iintlobo ezintathu zememori - inqanaba elinye, amanqanaba amanqanaba amaninzi okanye iiseli zenqanaba lesithathu.
1. Iiseli zenqanaba elinye zezona zikhawulezayo nezomeleleyo kuzo zonke iiseli. Ke, zezona zibiza kakhulu. Ezi zenzelwe ukubamba idatha enye nangaliphi na ixesha.
2. Iiseli zamanqanaba amaninzi ingabamba ii-bits ezimbini zedatha. Kwisithuba esinikiweyo, banokubamba idatha ngakumbi kuneeseli zenqanaba elinye. Nangona kunjalo, banesiphene-isantya sabo sokubhala siyacotha.
windows 10 imenyu yokuqalisa ngempazamo ebalulekileyo
3. Iiseli zamanqanaba amathathu Ezona zixabiso liphantsi liqashiso. Azomelele kancinci. Ezi seli zinokubamba idatha ezi-3 kwiseli enye. Babhala isantya sesona sicothayo.
IiDisk eDisk eziHard ibe sisixhobo esigcinekayo sokugcina iinkqubo, ixesha elide. Ke, ukuba iinkampani zitshintshela kwii-SSDs, kukho isizathu esivakalayo. Makhe sibone ukuba kutheni ezinye iinkampani zikhetha ii-SSDs kwiimveliso zazo.
Kwi-HDD yesiko, uneemoto ukujikeleza isitya, kunye nentloko ye-R / W ihamba. Kwi-SSD, ukugcinwa kuthathwa ngononophelo lweememori zeetshiphu. Ke, akukho zixhobo zihambayo. Oku kwandisa ukuhlala kwesixhobo.
Kwiilaptops ezinedrive drive, isixhobo esigciniweyo siya kudla amandla amaninzi okujikeleza isitya. Kuba ii-SSDs azinazo iindawo ezihambayo, iilaptops ezinee-SSD zisebenzisa amandla amancinci. Ngelixa iinkampani zisebenzela ukwakha ii-HDD zeHybrid ezisebenzisa amandla amancinci ngelixa zijikeleza, ezi zixhobo ze-hybrid ziya kudla amandla amaninzi kune-solid-state drive.
Ewe, kujongeka ngathi akunazo naziphi na izinto ezihambayo eziza nezibonelelo ezininzi. Kwakhona, ukungabinayo into yokusonta okanye ukuhambisa iintloko ze-R / W kuthetha ukuba idatha inokufundwa kwi-drive phantse kwangoko. Ngee-SSD, i-latency iyancipha ngokubonakalayo. Ke, iinkqubo ezinee-SSD zinokusebenza ngokukhawuleza.
Okucetyiswayo: Yintoni iMicrosoft Word?
Ii-HDDs kufuneka ziphathwe ngononophelo. Njengoko zinamacandelo ahambayo, zithambile kwaye zibuthathaka. Ngamanye amaxesha, kwanokungcangcazela okuncinci okuvela kwithontsi kungonakalisa ifayile ye- I-HDD . Kodwa ii-SSDs zinamandla apha. Banokumelana nefuthe elingcono kunee-HDD. Nangona kunjalo, kuba banenani elipheleleyo lemijikelezo yokubhala, banobomi obumiselweyo. Azinakusebenziseka nje ukuba imijikelo yokubhala iphelile.
thelekisa iifolda ezimbini windows 10
Ezinye zeempawu ze-SSD zichaphazeleka kuhlobo lwazo. Kweli candelo, siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo ze-SSD.
1. 2.5 - Xa kuthelekiswa nazo zonke ii-SSD ezikuluhlu, oku kucotha. Kodwa isakhawuleza kune-HDD. Olu hlobo lufumaneka ngexabiso nge GB. Luhlobo oluqhelekileyo lwe-SSD olusetyenziswayo namhlanje.
2. mSATA - m imele i-mini. I-mSATA SSDs zikhawuleza kune-2.5. Bakhethwe kwizixhobo (ezinjengeelaptops kunye neencwadana zokubhala) apho indawo ingeyiyo ihotele. Banento encinci yefom. Ngelixa ibhodi yesekethe kwi-2.5 ifakiwe, ezi zikwi-mSATA SSDs azivelanga. Uhlobo loqhagamshelo luyahluka.
3. SATA III - Olu nxu lumano olukuhambelana ne-SSD kunye ne-HDD. Oku kuye kwaduma xa abantu beqala ukutshintshela kwi-SSD ukusuka kwi-HDD. Isantya esicothayo se-550 MBps. Idrive iqhagamshelwe kwibhodi yomama isebenzisa intambo ebizwa ngokuba yintambo ye-SATA ukuze ibe nokuxinana.
Zine. I-PCIe - I-PCIe imele iPheripheral Component Interconnect Express. Eli ligama elinikwe indawo yokubeka indawo edla ngokwakha amakhadi emizobo, amakhadi ezandi, nokunye okunje. Ii-SSD zePCIe zisebenzisa esi slot. Zizona zikhawulezayo kuzo zonke kwaye ngokwendalo, ezibiza kakhulu nazo. Banokufikelela kwisantya esiphantse saphindeka kane kuneso a Ukuqhuba kweSATA .
5. M.2 - Njengokuqhuba kweMSATA, banebhodi yesekethe engenanto. Iidrive ze-M.2 zezona zincinci kuzo zonke iintlobo ze-SSD. Ezi zixoka ngokugudileyo ngokuchasene nebhodi yomama. Banesikhonkwane esincinci sokudibanisa kwaye bathatha indawo encinci. Ngenxa yesayizi yabo encinci, banokushushu ngokukhawuleza, ngakumbi xa isantya siphezulu. Ke, beza ne-heatsink / isasaza sobushushu esakhelweyo. Ii-SSD ze-M.2 ziyafumaneka kuzo zombini ii-SATA kunye Iindidi zePCIe . Ke ngoko, ukuqhuba kwe-M.2 kunokuba nobungakanani obahlukeneyo kunye nesantya. Ngelixa i-mSATA kunye ne-2.5 iidrive azikwazi ukuxhasa i-NVMe (esiza kuyibona ngokulandelayo), iidrive ze-M.2 zinakho.
6. I-NVMe - I-NVMe imele Imemori engaguquguqukiyo yeMemori . Eli binzana libhekisa kujongano ngee-SSDs ezinje ngePCI Express kunye nedatha yokutshintshiselana ye-M.2 kunye nomphathi. Ngonxibelelwano lwe-NVMe, umntu unokufikelela kwizantya eziphezulu.
Ukuba ii-SSD zinokunikezela okuninzi, Kutheni bengatshintshanga ngokupheleleyo ii-HDD njengesixhobo sokugcina? Isithintelo esibalulekileyo koku lixabiso. Nangona ixabiso le-SSD ngoku lingaphantsi kunoko lalinjalo, xa lingena kwimarike, Ii-HDD iseyeyona ndlela inexabiso eliphantsi . Xa kuthelekiswa nexabiso lehard drive, i-SSD inokuxabisa phantse kathathu okanye kane ngaphezulu. Kwakhona, njengoko usonyusa umthamo wedrive, ixabiso likhawuleza likhuphe. Ke ngoko, ayikabi lukhetho olunokubakho kuzo zonke iinkqubo.
Funda kwakhona: Jonga ukuba iDrayivu yakho yi-SSD okanye i-HDD ngaphakathi Windows 10
windows 10 iiapps ezingasebenzi emva kohlaziyo
Esinye isizathu sokuba ii-SSD zingakhange zithathe indawo ye-HDD ngokupheleleyo sisikhundla. Inkqubo eqhelekileyo ene-SSD inokuba namandla ku-512GB ukuya kwi-1TB. Nangona kunjalo, sele sineenkqubo ze-HDD ezinee-terabytes ezininzi zokugcina. Ke ngoko, kubantu abajonga amandla amakhulu, ii-HDD isekukukhetha kwabo.
Siyibonile imbali emva kophuhliso lwe-SSD, indlela eyakhiwe ngayo i-SSD, izibonelelo ezibonelelayo, kwaye kutheni ingakhange isetyenziswe kuzo zonke ii-PC / iilaptops okwangoku. Nangona kunjalo, yonke into entsha kwitekhnoloji iza nokuseta kwayo. Zeziphi izinto ezingalunganga kwi-solid-state drive?
1. Isantya sokubhala - Ngenxa yokungabikho kweendawo ezihambayo, i-SSD inokufikelela kwidatha kwangoko. Nangona kunjalo, i-latency kuphela ephantsi. Xa idatha kufuneka ibhaliwe kwidiski, idatha yangaphambili kufuneka icinywe kuqala. Ke, ukubhala imisebenzi kuhamba kancinci kwi-SSD. Umahluko wesantya usenokungabonakali kumsebenzisi ophakathi. Kodwa kuyinto engathandekiyo xa ufuna ukudlulisa isixa esikhulu sedatha.
2. Ukuphulukana nedatha kunye nokubuyisa- Idatha ecinyiweyo kwindawo eqinileyo yokuqhuba ilahlekile ngokusisigxina. Kuba akukho kopi yedatha ixhaswayo, oku kuluncedo olukhulu. Ukulahleka okungapheliyo kwedatha ebuthathaka kunokuba yinto eyingozi. Ke, inyani yokuba umntu akanakho ukubuyisa idatha elahlekileyo kwi-SSD ngomnye umda apha.
3. Ixabiso - Oku kunokuba sisithintelo sethutyana. Kuba ii-SSDs zithekhinoloji entsha, kuyindalo ukuba ziyabiza kunee-HDD zemveli. Sibonile ukuba amaxabiso anciphisile. Mhlawumbi kwiminyaka embalwa, iindleko azizukuthintela abantu ukuba batshintshele kwii-SSD.
Zine. Umsebenzi wobomi - Ngoku siyazi ukuba idatha ibhaliwe kwidiski ngokususa idatha yangaphambili. Yonke i-SSD ineenombolo ezimiselweyo zokubhala / ukucima imijikelezo. Ke, njengoko usondela kumda wokubhala / wokucima umjikelo, ukusebenza kwe-SSD kunokuchaphazeleka. I-avareji ye-SSD iza ne-1,00,000 yokubhala / yokucima imijikelezo. Eli nani liphelileyo lifinyeza ixesha le-SSD.
5. Ukugcina - Njengeendleko, oku kungaphinda kube ngumda wethutyana. Ukuza kuthi ga ngoku, ii-SSDs zifumaneka kuphela kumthamo omncinci. Kwii-SSDs zamandla aphezulu, umntu kufuneka aqokelele imali eninzi. Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba singaba nee-SSD ezifikelelekayo ezinesikhundla esifanelekileyo.
windows i-10 yeBluetooth engekho kwiziko lesenzo
windows 10 uhlaziyo oluzenzekelayo lwasekhaya